Fedora nwụnye ntuziaka 18 Nzọụkwụ Nzọụkwụ | Site na Linux
Fedora 18 Nzọụkwụ Nzọụkwụ Ntuziaka
Oge a anyị na-ewetara gị ihe nduzi nke ndozi nke ohuru Fedora 18, nkesa nke nkwado Red Hat nke ahụ agaghị ahapụ onye ọ bụla.
Tupu ịwụnye Fedora 18, ị ga-agbaso usoro 3 ndị a:
Budata na Fedora ISO oyiyi. Na Fedora peeji nke, ị ga-ahọrọ ụkpụrụ ụlọ na desktọọpụ ebe ị họọrọ. Ọ bụrụ na ị maghị ihe nke a bụ, ana m akwado ka ị gụọ nke anyị ndu na nkesa, maka mmeghe.
Hazie BIOS nke mere na ọ bu akpụkpọ ụkwụ si CD / DVD ma ọ bụ site na pendrive, dị ka ihe ị họọrọ na gara aga.
Bootloader ga-apụta. Họrọ Malite Fedora 18. Mgbe ịmalite usoro, nbanye nbanye ga-apụta. Họrọ nhọrọ Onye ọrụ sistemụ dị ndụ.
Ozugbo ịbanye, pịa akara ngosi Wụnye na draịvụ ike:
Na ihuenyo na-esote ị ga-enwe ike hazie ụbọchị na oge, kiiboodu na atụmatụ nkewa nke diski ike. Iji mee nke a, pịa otu n'ime nhọrọ ndị a. Nhazi ya amaghi ezi, ma ewepu nkewa nke disk, nke anyi gha ahu karie.
Pịa na draịvụ ike ebe ịchọrọ ịwụnye usoro wee pịa bọtịnụ ahụ Gaa n’ihu. Ọ bụrụ na ịchọrọ izo ya ezo, iji nweta nchekwa ka ukwuu, họrọ nhọrọ Zoo data m. A na-atụ aro nhọrọ a naanị n'ọnọdụ dị oke mkpa, ebe ọ bụ na arụpụtaghị arụmọrụ arụmọrụ adịghị mma.
Ọkachamara nkewa disk ga-amalite.
N'oge a, enwere nhọrọ 2:
a) wepu sistemụ arụmọrụ ochie ma wụnye. Nke a bụ nhọrọ kachasị mfe: hichapụ ihe niile ma wụnye n'elu. Enweghị mkpa ikpo isi gị banyere nkewa disk ma ọ bụ ihe ọ bụla yiri ya. Na ọkachamara ọkachamara Fedora 18, a na-akpọ nhọrọ a Ikwu ohere.
Usoro ị ga - agbaso na nzọụkwụ a bụ naanị ịhọrọ nkebi ịchọrọ ihichapu, họrọ Hichapụ na mgbe ahụ Ikwu ohere.
b) nkebi disk na aka. Nke a bụ nhọrọ. A na-atụ aro ya maka ndị ọrụ etiti ma ọ bụ ndị ọrụ dị elu maara ihe nke a pụtara. Nzọụkwụ ọ bụla na-ezighi ezi nwere ike ibute ọnwụ data na diski. Ọ bụrụ n’ịchọghị itinye ndụ ya n’ihe egwu, emela ya. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịga n'ihu, họrọ nhọrọ Nhazi atụmatụ nkewa. Anaconda ga-atụ aro atụmatụ atụmatụ "ezigbo", agbanyeghị ọ ga-ekwe omume gbanwee ya site na ịhọrọ nhọrọ ahụ Achọghị m enyemaka, ka m hazie nkewa disk.
Na ikpeazụ nzọụkwụ, ọ ga-arịọ gị ka ịtọ onye nchịkwa paswọọdụ.
Ozugbo emere ya, nrụnye usoro ga-amalite.
Mgbe echichi ahụ mechara, ị ga-enwe ike ịnụ ụtọ usoro ọhụrụ gị: Fedora 18.
Ndị chọrọ nwere ike ịnweta ndu echichi Fedora 18 (Bekee naanị n'oge a).
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Faịlụ FileLet jiri » Fedora 18 Nzọụkwụ Nzọụkwụ Ntuziaka
Achọrọ m ịma otu esi eme ya ma ọ bụrụ na ị nwere UEFI, o kwesiri ịkwado ya, mana ọ naghị ekwe ka USB dị ndụ malite, anyị na-ejikwa Legacy ma ọ bụrụ na ịgbalite UEFI ọ naghị amalite ma ị ga-ahapụ Legacy. .. Ọ ga-amasị m ịmalite site na UEFI dị ka Ubuntu 13.04 si eme
Zaghachi Oscar Gonzalez
Julian David Yepes Carreño dijo
Ihe ọzọ na obi esighi m ike karie ubuntu? Daalụ, enwere m olileanya na protein laghachiri 😀
Zaghachi Julian David Yepes Carreño
Nke ahụ bụ subliminal xD jaaaai xD
Ndo maka ịkọwa ntakịrị mmehie na ịhapụ ihe ọ bụla bara uru. Ntuziaka ahụ dị m ka ọ dị oke mma, yana ihe oyiyi nke nzọụkwụ site na nzọụkwụ dị oke mkpa. Okwu nke boot abụọ na windo $ nwere ike ịhapụ, nke maka ndị ọrụ ọhụụ nwere ike ịbụ ikpe izugbe, mana karịa nke ahụ, ọ ga-adị mkpa ichere maka «Ihe ị ga-eme mgbe ị wụnye installing. 😛
Zaghachi Jerónimo Navarro
A na-etinye akara ngosi Linux Mint na aha.
Ọbụghị naanị akara ngosi njikọ Fedora na - eduga gị na Linuxmint
Daalụ maka tuto ..
enyere m aka ịwụnye fedora 18 ọdịyo na vidiyo codec
Daalụ ugbu a, e jeere m ozi, aga m enweta mango site na ịwụnye nri ehihie.
Zaghachi Ariel Gimenez
Ndewo, abum onye newbie, ohuru ohuru na mma fedora. Ọ bụ oge mbụ m ga-eji linux. Ichere na fedora abughi nke m? M na-eji windo mgbe niile.
Echere m na ị ga-ebu ụzọ jiri Ubuntu, ebe ọ bụ otu n'ime nkesa kachasị mfe.
Ndewo ndị enyi, e tinyela m fedora 18 na ihe niile dị mma belụsọ kedu ka m ga-esi egwu vidiyo na egwu? Ọ na-ajụ m maka kodeks mana enweghị m ike ịchọta nchekwa ... Kedụ ka m ga - esi hazie brọtịịl na - enweghị njikọ njikọta na ịnyefe faịlụ? .. na N'ikpeazụ Ebe na kedu ka m ga-esi budata vlc ??… Ana m eche ka azịza biko. Cheers!.
Zaghachi Fedora 18
Enwere m nsogbu, ebudatara m DVD abụọ, otu site na iyi na otu site na nbudata nkịtị. Ana m eji x86_64. Oge mbụ enwere m ike ịwụnye ya nke ọma, mana ebe ọ bụ na edeghị m ya kpamkpam (echefuru m), achọrọ m ịwụnye ọzọ site na ebe ahụ na otu dvd ma ọ bụ na nke ọzọ ọ na-enye m njehie mgbe m na-ahọrọ asụsụ ahụ, ma o kweghi ka m gaa n’ihu, ya bu na mu si na n malite ihe ozo. Amachaghi m ihe banyere Linux, ejiri m obi uto rụọ ọrụ na 17 mana ugbu a amaghị m ihe mere ya.
Ndụmọdụ m: chebe onwe gị nsogbu ma tinyegharịa fedora 17 ... ma ọ bụ gbanwee gaa distro ọzọ.
M na-ahụ na ị na-eji virtualbox, ị nwere ike ịhapụ m nhazi nke igwe, enwere m nsogbu mgbe m malitere ịwụnye ma eziokwu bụ na amaghị m ihe na-eme.
Ọ bụghị newbies, ọ bụ onye ọrụ nkịtị.
Kedu maka buut na ihe niile? D :, n'ezie, ọ bụrụ na ọ "esiri ike" ịwụnye fedora, m na-ekwu, ọ bụrụ na ị nwere ike, enwere m ike, anaghị m ekwu mba mana onye nrụnye na-asọ oyi, o nwere ọtụtụ ihe mgbochi na onye ọrụ nwere obere ihe ọmụma anaghị enwe mgbagwoju anya mana Ọ D canGH can ịwụnye Fedora naanị, eziokwu, bụ nnukwu OS, enwere m mmasị na ya mana ihe kwesịrị ịmụ ihe site na Debian ma ọ bụ Ubuntu maka ilekwasị anya na obere nkọwa na-eme ka ndụ gị dịkwuo mfe, maka ndị ọzọ niile enweghị ihe ị ga-eme mkpesa ịmara ọ ezigbo distro nke na-ewe oge (:
ihi ejikoo na tor? 😛
Achọrọ m enyemaka gị!
Ana m anwa ịwụnye Fedora site na pendrive, mana mgbe ọ malitere ọ naghị enye m nhọrọ ịmalite dị ka "Live System User". Maka gịnị bụ ihe a? Ihe ngwọta ọ bụla na nke a?
Zaghachi Eddy Juárez
Ndewo, achọrọ m enyemaka gị, achọrọ m ịhazigharị draịvụ ike m, ya bụ, ngalaba nke fedora bụ, Achọrọ m ime ka ọ buru ibu, aro—-
onye oru ohuru dijo
Mgbe etinyere ya, Fedora na-ebu otu repo? EPEL ma ọ bụ ọzọ, ma ọ bụ ọ dakọtara na centos ma ọ bụ Redhat repo, ya bụ, enwere ike iji ihe ndị a ma e wezụga fedora Epel?
Zaghachi onye ọrụ ọhụrụ
Iji ihe nchọgharị weebụ dị ka ihe ntanetị na ntanetị
Consort: Ebe obibi Desktọpụ ọhụrụ maka SolusOS amụrụ